Samy nametraka ireo fepetra takiany ireo kaompania tsirairay manoloana ny Airbus, anisan'izany ny fepetra famoahana ny mpandeha rehetra ao anatin'ny 90 segondra raha sanatria misy loza, ny tsy hanovana be loatra ny seranam-piaramandiina andray azy, ny teknolojia ampiasaina, ny fanofanana ireo mpanamory.
Notombanana ho 11 miliara dolara ny ho laniana amin'ny fikarohana sy ny famoronana ity fiaramanidina goavana ity. Nefa dia nitombo avo roa heny izany rehefa tena natao ny asa 4 taona taty aoriana.
Raha 1400 no tanjona amin'ny isan'ny fiaramanidina ho vokarina, satria novinaniana fa ho betsaka ireo renivohitry ny firenena hampiasa ity A380 ity, dia 42 ihany no nisy nanao kaomandy tany amboalohany.
19 taona aty aoriana dia 241 fiaramandina ihany no kaomandy voaray. Lavitry ny afo ny kitay, ka dia nanapakevitra ny Airbus fa dia ajanona amin'ny taona 2021 ny famokarana ity fiaramanidina atao any Toulouse France ity.
Ny Airbus moa dia orinasa eropeanina, izay mandray anjara amin'ny fanamboarana ny piesy rehetra ireo firenena eropeanina toa an'i Allemagne, fa ny fanambarana ireo piesy rehetra ireo no atao any Toulouse France.
Maroantsetra: Miezaka mba hahasarika mpizahatany »